Kuni erga raawatamee booda gaafa sadaasa11 galgala jechuun sanbata xiqqa galgala saa'aati 3 ti baratootni tigiree qindaahuun baratoota Oromoo reebaniiru. Sababa kanaan waliti bu'umsa ta'een namooti miidhaman ni jiru. Gaafa sanbata duraa (sadaasa 11, 2006) galgala sana polisiin federaalaa moraa senuun dhukaasa banee waliti bu'umsa kana qabaneessuu yaalee barattootni gama lachuu galgala sanaaf galma adda addaa keessa kan isaan bulanii hara'a ammoo jechuun dilbata doormiin isaanii akka sakata'amuuf ajaji darbee jennan ilmaan Tigiree ni didanii. Haa ta'u malee polisiin dirqiin dormii barataa tigiree ta'e tokko shakkee gaafa sakata'u meeshaa waraanaa lokaarii isaa keessati argamee wari kaan ammoo sakata'aamu didani jiru. Kana irraan kan ka'e ijooleen Oromoo meeshaan waraanaa ilmaan tigree dormii keessatti akkaataa itti galchanii fi meeshaan biraa kan barattoota Oromoo fi saboota cunqurfamoo ittiin waraanuun mooraa mana barnootaa keessa gale waan jiruuf akka daddaffiin dhimmi kun sakatta`amuu akeekkachiisaniitu. Yoo kun ta`uu baate sororkeessitooti ilmaan tigree meeshaa waraanaa isaan harka jiruun akka jeequmsa uumuu dandahan yaaddoo qaban ibsu. Ilmaan Oromoos sababa ilmaan Tigree meeshaa waraanaa hidhatanii barataniif shororkaahuun qabsoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu galamaan gahuuf qabsaahuu irraa akka of duuba hin deebine ibsanii, ittuu jabeessanii akka itti fufan dhaammatu.
Gaafa sanbata xiqqaa (sadaasa 9, 2006) galgala manni bulchiinsa aanaa Gudar irratti humna hin beekkamneen boombii dhan fudhatameen manni bulchiinsa kanaa gubateera. Humni hin bekkamne kun akka tarkaanfii isaa itti fufu mallattooleen ibsee jira. Ibsa isaa keessatti akka tarkaafiin fudhatamu kun akka itti fufu dhaamu. Tarkaaniifn nama kana irratti fudhatameefis saababni isaa ilmaan Oromoo hiraarsuu keessaa waan harka qabuuf ta`uun hubatameera. Tarkaanfiin kun ammaaf mallattoof malee yoo gochaa isaa lukkummaa fi fokkisaa kana irraa hin deebine akka lubbuun isaatti tarkaanfatamu qaamni tarkaanfii kun addeessee jira. Akka namoonni lukkee ta`anii bakka bakkatti ilamaan Oromoo irratti duulaa jiran of qusatan ta`uu baannaan hireen isaan eeggatu du`a ta`u akka hubatan akeekkachiisu. Lukkeeleen garaa guuttachuuf lubbuu dhabuuf deemu!